Steel Spool fonosana plastika Baling Wire - China Ningbo Judin Special Monofilament
Teknolojia & Innovation
Steel Spool fonosana plastika Baling Wire
Wooden Spool fonosana Plastic Baling Wire
Plastic fonosana plastika Spool Baling Wire
4 x 4 MG Monofilament Plastic Wire
Tsara for RDF Bailing
Misy amin'ny bespoke halava sy fitsipika habe
RDF, na Ataon'ny Anarana Fuel, mampiasa ny teknolojia izay miteraka angovo avy amin'ny fandaniam-poana izay nety ho fanodinana nentim-paharazana. Ny fahatsapana ny filàna ny baling tariby izay mety ho RDF, dia lasa ny vokatra izay mety ho baling fandoroana fako ho an'ny tanjona.
Rehefa baling ary strapping mafy ny fandoroana fako, ny nentim-paharazana baling tariby vy dia tsy maintsy nesorina alohan'ny dingana manomboka mirehitra. Izany no asa mafy sy lafo vidy.
Ny vaovao irery ihany JUDIN Plastika Wire nanorina sy vokarina avy Judin afaka hodorana mandritra ny dingana fandoroana ny calorific manome sanda.
Length isan-coil: 13000 M
Weight isaky ny metatra: 0,018 kilao
Halebeazana ny horonan-taratasy, φ 550 X 270mm
Tensile fiatoana amin'ny halavan'ny iray: 5000 N
Tensile fiatoana amin'ny faribolana amin'ny fatotra: 4800 N
Elongation amin'ny fiatoana amin'ny halavan'ny iray: 15%
Bales azo mavesatra entana ao amin'ny fatana fandoroana nofonosina tanteraka tsy misy tsehatra izay be hamonjy ny fotoana sy ny vola amin'ny alalan'ny fanatsarana ny rafitra fikarakarana.
Namatsy in 13000 Meter reels, milanja 235 kilao monja, izay mitovy amin'ny eo ho eo amin'ny 750 kilao ny vy tariby. Koa amin'izany, raha manify ny RDF / SRF Baler ny format manan-tompo fahana tolàm (izay misy ny hanafatra) ny fikarakarana sy ny asa tahiry nentina hanakalo Reels dia mihena be, izay Fanasoavana ny operatives.
Reel tsirairay dia matetika miteraka 2800 Bales (mifototra amin'ny Bale habe ny 1.2m X 1m X 1m) ka hamonjy manan-danja be ny fotoana ho an'ny operatives. Ny Judin Plastika Wire manana famakiana aretina mitovy amin'ny tariby ambany tensile vy ary miovaova / matanjaka nampiasaina.
Ny fampiasana ny JUDIN Plastika Wire negates ny sazy takin'ny ankehitriny ny ankamaroan'ny EU incinerators mba retrieve vy tariby avy amin'ny lafaoro lehibe, dia izao aza famokarana tahiry vidiny.
Mpanjifa mampiasa JUDIN Plastika Wire dia hanokatra bebe kokoa toerana / fahafahana fandraisana ny fitaovana.
Previous: Wooden Spool fonosana Plastic Baling Wire
Plastic 4x4 Baling Wire
Inflammable 10 Mp Square Baling Wire
Inflammable Macpress Plastika Baling Wire
Inflammable Presona Plastika Baling Wire
Inflammable Sacria Machines Plastika Baling Wire
Inflammable UnoTech Plastika Baling Wire
Recycle Plastika Baling Wire
Address: # 3 Ind & TD Road, Jishigang Industrial Park, Yinzhou District, Ningbo, 315171, PR Shina